Naya Post Nepal | जेलेन्सकीले सार्वजनिक रुपमै बाइडेन पुटिनसँग ड राउदैनन भन्नुको अर्थ के हुन सक्छ ? (भिडियो सहित)
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्सकीले आफ्ना अमेरिकी स मकक्षी जो बाइडेन रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन डरा’उँछन् भन्ने आफूलाई विश्वास नलागेको बताएका छन् । फक्स न्युज लाई शुक्रबार अन्तर्वार्ता दिने क्रममा जेलेन्स्कीले भनेका छन्, “मलाई बाइडेन पुटिनदेखि ड’राउँदैनन् भन्ने विश्वास किन लाग्छ भने उनी एउटा ठूलो मु’लुक’का नेता हुन् ।”
फक्स न्युजको स्पेसल रिपोर्टमा उनले भनेका छन्, “म मेरो मुट्ठी कसिरहेको छु । यो हाम्रो परम्परा हो । मलाई थाहा छैन तपाईंहरूले यो मान्यतालाई बु’झ्नु हुन्छ कि हुँदैन । मैले मुट्ठी कस्नु वा औँलाहरू क्रस गर्नुको अर्थ अमेरिकाका कुनै पनि रा ष्ट्रपति रुससँग ड’राउँदैनन् भन्न खोजेको हो ।
किनभने, हाम्रो लागि अमेरिका सदैव प्रजातन्त्रको प्रतीक हो । मलाई विश्वास छ, अहिले युक्रेन पनि स्वतन्त्रताको प्रतीक नै हो ।” रुसबाट युक्रेनमा गरिएको आक्रमणको अन्तर्राष्ट्रियजगत्बाट आ’लोच’ना भइरहेको छ । बेलायत, क्यानडा र अमेरिकालगा यत मुलुकले जारी गरेका आर्थिक
प्रतिबन्धका कारण रुस र त्यहाँका अत्यन्तै धनाढ्य व्यक्ति हरूका अर्थतन्त्रमा ठूलो न’कारात्म”क प्र’भाव परिरहेको छ । युक्रेन यु’द्ध सुरु भएदेखि नै बाइडेनले खुला रूपमा रुसी कार्य को वि’रोध गर्दै आएका छन् । उनले गएको महिना पुटिनलाई ‘यु’द्ध अ’पराधी’को संज्ञा दिएका थिए ।
हालै मात्र पो’ल्यान्ड भ्रम’णका क्रममा बाइडेनले पुटिनलाई ‘कसाही’को संज्ञा दिएका छन् ।एकपटक त बाइडेनले पुटिन सत्तामा रहिरहन सक्दैनन् समेत भनेका थिए । तर, तत्कालै ह्वाइ हाउस र अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले उनको सो आशय स’च्याए’का थिए ।
उनले भने, ‘अहिले एकखालको भ्यू टावर वि”रोधीहरू’ले हल्ला चलाएका छन । मलेसियामा महाथिरले त्यो ट्विन टावर बना एका थिए । त्यो बनाएका बेला महाथिर पागल हो कि क्या हो ? यो गरिब देशको सारा पैसा त्यहाँ लगेर खर्च गरेर भ्यू टावर बनायो भन्ने ठूलो आ’लोच’ना थियो ।
त्यो अमेरिकाको मात्रै होइन विश्व बजार केन्द्र थियो । मलेसिया का त्यस्तै । हामीले बनाएका भ्यू टावरहरू सभ्यताका, विकास का, हाम्रा व्यापारिक अन्य आर्थिक क्रियाकलापका केन्द्रहरू हुन् । हाम्रा पर्यटनका स्थलहरू हुन् ।
तर, केही मान्छे बुझ्दैनन् र के भन्छन् भने–अब उनीहरूको पा र्टीको नाम लिएर हाम्रो पार्टीले अब यो भ्यू टावर बनाउन्न भनेर कसम खानुपर्नेछ । प्रतिज्ञा गर्नुपर्नेछ भन्दै हिँड्छन् । उहाँ हरूको पार्टीले प्रतिज्ञा गरेकै छ त– विकास, निर्माण नगर्ने ।’
ओलीले सामाजिक सेवा केन्द्रले भोटको राजनीति नगर्ने दाबी गरे । कार्यक्रममा ओलीले सेवा केन्द्रको संयोजकको जिम्मेवारी पार्टीका सांसद एवं उद्योगी मोती दुगडलाई तोकिएको पनि घोष णा गरे । नयाँ पत्रिका बा’ट ।
२०७८ चैत्र २२, मंगलवार प्रकाशित 1 Minute 590 Views